Ungayisebenzisa kanjani i-Linux boot nge-E4rat | Kusuka kuLinux
Ungayisebenzisa kanjani i-Linux boot nge-E4rat
E4rat (I-Ext4 - Ukunciphisa Isikhathi Sokufinyelela) iqoqo le- i-herramientas ukuze sheshisa inqubo yokuqalisa, kanye nezinhlelo zokusebenza ezilayisha ekuqaleni, ukubhalisa amafayela asetshenziswe kumzuzu wokuqala wokuqala wokuqalisa, ukuwahambisa kabusha y zilayishe kuqala, ngaleyo ndlela kuqedwe izikhathi zokusesha nokubambezeleka kokujikeleza. Lokhu kuholela ezingeni eliphakeme lokudlulisa i-hard drive.
Le nqubo inezinyathelo ezintathu: ukuqoqa imininingwane mayelana nokuqalisa, ukufaka kabusha amafayela, bese uwafaka ekuqaleni ngakunye.
Khumbula ukuthi lokhu kusebenza kuphela ngamadiski kazibuthe futhi adinga ukufomethwa ku-ext4.
Sizoqala ngo- landa uhlelo.
Ngaphambi kokuyifaka, kufanele sisuse i-ureadahead, ukuze ingangqubuzani nayo:
Sudo dpkg --purge ureadahead ubuntu-minimal
Sifaka ukuncika kwe-e4rat:
sudo apt-get ukufaka libblkid1 e2fslibs
Ngemuva kwalokho sifaka uhlelo.
Manje sengizokuchazela kalula ngangokunokwenzeka ukuthi ungayenza kanjani isebenze. Okokuqala, kufanele sihlele i-grub yethu noma i-grub2 njengoba kungaba njalo:
I-sudo nano /boot/grub/grub.cfg
Ngaphakathi kwefayela sibheka umugqa ofana nalokhu:
linux   /boot/vmlinuz-2.6.38-10-generic root=UUID=92f37630-c3b4-476b-a0ab-f4a0d9f4180f ro
Futhi sengeza okulandelayo ekugcineni komugqa:
Mina, kubukeka kanjena:
i-linux / boot/vmlinuz-2.6.38-10-generic root = UUID = 92f37630-c3b4-476b-a0ab-f4a0d9f4180f ro buthule splash vt.handoff = 7 init = / sbin / e4rat-ukuqoqa
Isinyathelo esedlule singenza ngokufana ngqo kusukela ekuqaleni, lapho isikrini se-grub sivela, sisemgqeni we-OS yethu bese sicindezela u-'e 'ukuyihlela. Uma kwenzeka unamasistimu amaningana afakiwe kudiski, kulula ukwenza njalo, ngoba sigwema ukuzibandakanya nokuqala kwezinye.
Uma lokhu sekuqedile, sivala umhleli Ctrl + X, bese siqala kabusha.
Lapho iqeda ukulayisha isistimu, kufanele sivule izinhlelo esivame ukuziqala kaningi, njengesiphequluli, umphathi weposi, njll., Sinemizuzu emibili ukukwenza. Uma lokhu sekwenzile siqinisekisa ukuthi ifayela le-log selakhiwe.
Impendulo kufanele ibe yi-startup.log, uma ingakukhombisi lutho kuzofanela uphinde izinyathelo.
Manje sibuyela ekuhleleni i-grub, kulokhu sikwenza kusuka kusikrini sasekhaya ngokucindezela u-e, njengoba ngichazile ngenhla. Futhi sengeza ipharamitha eyodwa ekugcineni komugqa esishilo ngaphambili, ngokulandelayo:
linux   /boot/vmlinuz-2.6.38-10-generic root=UUID=92f37630-c3b4-476b-a0ab-f4a0d9f4180f ro single
Siyavala bese siqala kabusha, kepha kulokhu sikwenza ngemodi ephephile noma kulayini womyalo. Ngena ngemvume ngegama lethu lomsebenzisi nephasiwedi bese wenza:
Uma lokhu sekwenziwe, i-e4rat iqala ukuhambisa amafayela kudiski yakho, (kungathatha isikhashana), lapho iqeda, siqala kabusha.
ukuvalwa kwe-sudo -r manje
Ukuze uhlelo luhlale luqala ekuqaleni futhi luhlala noma ngabe sibuyekeza, sihlela i-grub yethu:
futhi sibheka umugqa:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT = "chitha kancane"
Sifaka umugqa olandelayo ngaphambi kokuchaphaza ngokuthula,
init = / sbin / e4rat-preload
Ukuhlala ngale ndlela.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT = "init = / sbin / e4rat-preload splash buthule"
Sigcina ifayela, siphinde silayishe i-grub:
Sesinayo vele. Kusukela manje, izinhlelo ezijwayelekile zizolayisha ngokushesha okukhulu ekuqaleni.
Ngeminye imininingwane, ungavakashela i- ikhasi lephrojekthi emthonjeni.
Umthombo: Indawo yeLinux
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » Ungayisebenzisa kanjani i-Linux boot nge-E4rat
Sawubona okuhle, ngiyabonga ngokuphendula, ngizamile ukukwenza kepha angiphumelelanga, uma unesikhathi sokuvuselela okuthunyelwe nge-LM kungaba kuhle kakhulu, ngiyabonga uPablo.
Ngaleso sikhathi ngangizamile ngo-Ubuntu. Ngicabanga ukuthi kufanele kube khona umehluko omkhulu nge-LM.
Sawubona omuhle ngomnikelo, umbuzo wami ukuthi ngabe uke wakuzama nge-LM 13? Kuyasebenza?.
Impela! Ingasetshenziswa nakwamanye ama-distros. Umqondo bekuwukwethula uhlelo, uchaze ngezinyathelo zokufaka zabasha (ngokuvamile abasebenzisi be-Ubuntu kanye neningi labafundi be-blog). Labo abasebenzisa amanye ama-distros ngokuqinisekile bazokwazi ukuthi benzeni noma bangabheka kuphi ukuthola eminye imininingwane.
Ngiyizamile futhi iqiniso ukuthi ngilahlekelwe i-gdm yami, ngisebenzisa i-trisquel 5.0 esuselwe ku-Ubuntu 11.04, ngifuna ukwazi ukuthi ngabe kukhona yini ifayili engilihlelile ukuze ngikwazi ukubuyisa imvelo yami yokuqhafaza, ngiyabonga
Ingasetshenziselwa amanye ama-distros, isibonelo i-Archlinux ñ.ñ
Adrian garcia kusho
Ngeke ingivumele ngiyifake, yilokhu engikuthola ku-terminal:
Iphutha le-CMake ku- / usr/share/cmake-2.8/Modules/FindBoost.cmake:1138 (umyalezo):
Asikwazi ukuthola imitapo yolwazi eceliwe.
Ayikwazi ukuthola amafayela kunhlokweni we-Boost. Sicela usethe i-BOOST_ROOT empandeni
umkhombandlela oqukethe i-Boost noma i-BOOST_INCLUDEDIR enkombeni equkethe
Shayela isitaki (ikholi yakamuva kakhulu kuqala):
CMakeLists.txt: 20 (thola_iphakheji)
Iphutha le-CMake ku-src / cmake / Findext2fs.cmake: 17 (UMLAYEZO):
Ayikwazanga ukuthola ama-ext2fs
src / CMakeLists.txt: 57 (FIND_PACKAGE)
- Ilungiselela okungaphelele, kwenzeke amaphutha!
Phendula u-Adrian Garcia
Kulungile, ungalanda iphakethe lesikweletu, imithombo ilandwe ngqo kimi.
Ukurejista, ukufuduswa, nokulayishwa kabusha kwefayela kubukeka kukuhle, kepha ...
Ingabe kuthatha isikhathi eside ukuqala ukusatshalaliswa kwe-Linux? Ingabe kuyindaba yezinsizakalo esiziqhubayo? Ngabe silokhu sikhononda ngento efanayo?
Akungithathi ngaphezu kokuvula iselula bese ngifaka ikhodi yokuhlonza, futhi nginedrama ne-Ext4 kwazise i-distro yami yamanje, iSlax, ayiyiphathi le ndlela yamafayela okwamanje, esivele ithatha isikhathi. 😉
Ingabe into efana nalena yenzakala komunye umuntu?
Kufanele uhlele ifayela lokumiswa kwe-grub njengomsebenzisi omkhulu wohlelo ... Ngokusobala ngale ndlela ngeke kulondoloze ushintsho. Jabulela…
Nginezinkinga lapho ngihlela kusuka ku-boot.
Pulse e, engeza okukodwa kulayini bese ushayela ctrl + x
Ngemuva kwalokhu isikrini siba mnyama futhi kufanele ngiqale kabusha.
Ngibuyela kumhleli bese ngibona ukuthi ushintsho alulondolozwanga.
Ngiyabonga, kusebenze ngokuphelele ku-Debian. Ukuncika okuningi kakhulu (ama-libboots) kepha konke kulungile.
Ngicabanga ukuthi lokhu kusebenza akusizi ngamashayela we-SSD, akunjalo?
I-Linux kernel 3.3 isivele ine-RC (Umuntu Ozokhethwa Akhululwe)
I-Torvalds: "Uhlelo lobunikazi alusasebenzi ngokuphelele"